त्यसो भए एलियनले पृथ्वीको अवलोकन गरिरहेको छ !
फाइल तस्बिर (इन्टरनेट) ।
यो संसार अर्थात् पृथ्वीबाहेकका ग्रहमा जीवन होला कि नहोला ! यदि रहेछ भने कस्तो जीवन अस्तित्वमा होला ! त्यहाँ मान्छे होलान् के ! रहेछन् भने तिनीहरु कस्ता होलान्, कि हामीजस्तै पनि होलान् ! यी र यस्ता जिज्ञासा पृथ्वीका कुना कुनामा पाइन्छन् ।
अझ विकसित देशका अनुसन्धानकेन्द्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरुका लागि यो कुनै नौलो कुरा होइन । यसै पनि एलियनबारे धेरै कथा, किस्सा लेखिएकै छन्, कैयौं फिल्महरु बनेका छन् त कैयौँ उपन्यासका पात्रहरु एलियन छन् । तर अब यसमा केही सत्यता हुनसक्ने निष्कर्ष अध्ययनहरुले निकाल्दै गएका छन् । एक अध्ययनका अनुसार अन्य ग्रहबाट एलियनहरुले पृथ्वीजस्ता चट्टानी ग्रहहरुबारे एक्सोप्लानेटबाट सजिलै अध्ययन गर्नसक्ने कुरा पत्ता लागेको छ ।
वैज्ञानिकहरुले हाम्रो सौर्य प्रणालीमा नरहेका ग्रहबाट एलियनले पृथ्वीलाई सजिलै र सहजै अध्ययन गर्नसक्ने दाबी गरेका छन् । क्वीन्स युनिभर्सिटी बेलफास्टका अनुसार एलियनले पृथ्वीको अवलोकन गर्न सक्ने दाबी गरिएको हो ।
अन्तरिक्षमा रहेको ट्रान्जिट्सबाट सूर्यबाट अगाडि रहेकै केही आकाशीय भागहरु जहाँबाट धेरै ग्रहहरु देखिन्छन्, देख्न सक्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । थाहा भएका हाम्रो सौर्य प्रणालीबाट बहिरका हजारौँ एक्सोप्लानेटबाट ६८ वटा नयाँ संसारको पहिचान भएको छ जहाँबाट एउटा वा धेरै ग्रहहरुले हाम्रो सोलार सिष्टमबाट सूर्यको परिक्रमा गरिरहेका छन् । यसमध्ये नौ वटा ग्रहहरु पृथ्वीको अवलोकनका लागि प्रयोग गरिएको बताइएको छ । यद्यपि ती नौ ग्रहहरु पृथ्वीको जस्तो जीवन रहेको मानिँदैन । ग्यास ग्रहहरु जुपिटर, साटुर्न, युरेनस र नेप्ट्युन भन्दा पृथ्वीजस्ता चट्टानी ग्रहहरु अवलोकनका लागि सजिलो हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
यो रिसर्च रोयल एस्ट्रोनमिकल सोसाइटीको मन्थ्ली नोटिसेज भन्ने जर्नलमा प्रकाशित भएको छ ।
अमेरिकाको एरिजोनामाथि उडान भरिरहेका पाइलटले भेटे एलियन जहाज !
उत्तर अमेरिका । अमेरिकाका व्यावसायिक पाइलटले एरिजोना भूमिमाथि आकाशमा अनौठो एलियन जहाज देखेको बताएका छन् । उनीहरुले उडान भरिरहेका बेला अनौठो वस्तु ककपिटबाट देखिएको फेडेरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसनले सार्वजनिक गरेको रेडियो
अनौठो त्रिकोणात्मक वस्तु चन्द्र सतहमा, के एलियन भेटिएकै हो त ? (भिडियोसहित)
कन्स्पिरेसी थिअरिष्ट (जो अपत्यारिला र असाधारण कुरामा विश्वास गरेर कुनै पनि घटनालाई नयाँ ढंगबाट शंका गर्छन्)हरुले चन्द्रमाको सतहमा चलिरहेको त्रिकोणात्मक आकारको वस्तुलाई आधार मान्दै एलियनहरुको आधारभूमि नै चन्द्रमा भएको आफूहरुले
नासाले पत्ता लगायो एलियन सोलार सिष्टम !
उत्तर अमेरिका । अमेरिकी स्पेस एजेन्सी नासाले अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण सफलता हात पारेको छ । नासाले केपलर स्पेस टेलिस्कोपबाट हाम्रो सौर्यप्रणालीजस्तै अन्तरिक्षमा अर्को ताराप्रणाली पत्ता लगाएको हो । यो तारा प्रणाली
उत्तर अमेरिका । कन्स्पिरेसी थिअरिष्ट (मनगढन्ते व्याख्याता) स्कट सी वेरिंगले नासालाई एलियनबारे धेरै कुरा थाहा भएको दाबी गरेका छन् । नासाले वर्षौँ वर्षदेखि अन्तरिक्ष यानहरुले धेरै तथ्यहरुबारे पत्ता लगाए पनि